kulan u dhaxeeyay Xubnaha Midowga Musharixiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo hada u socda iuo go aamo laga soo saaray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii kulan u dhaxeeyay Xubnaha Midowga Musharixiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo hada...
kulan u dhaxeeyay Xubnaha Midowga Musharixiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo hada u socda iuo go aamo laga soo saaray
kulan u dhaxeeyay Xubnaha Midowga Musharixiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka ayaa ku qabsoomay Aalada Zoomka, waxaana uu ahaa mid looga hadlayay xaalada siyaasadeed ee dalka.
Kulanka ayaa sigaar ah waxaa looga hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka, khilaafka kajira Arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa maadaama aan weli heshiis laga gaarin doorashooyinka.
Qoraalka oo ka kooban laba bog ayaa waxaa kamid ah shurudaha ay soo bandhigeen in baritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Maa’ida oo ay deganaayeen labada Madaxweynayaal hore ee Sheekh sharif & Xasan Sheekh rasaastii Ciidamada dowladda ku fureen qaar kamid ah Musharixiinta xilli ay ku banaanbaxayeen wadada gasha Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee magaalada muqdisho.
Warye Maxamed Carab
Previous articleKooxo Burcad ah oo Koonfur Afrika ku dilat muwaadin Soomali ah
Next articleBeesha caalamka oo ka baarandagaysa qodobo muhiim u ah habsami usocodsiinta hanaanka doorashada oo ay soo gudbiyeen Midawga musharixiinta.
Mareykanka ayaa sheegay inuu xadidi doono dadka uga imaanaya dalka Hindiya, wixii ka bilaawda horaanta bishan May , Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay...
Maxkamadda derejada kowaad Garoowe oo xukuntay shabakad ka kooban 9...
Koobki Qaaradda Yurub oo oo Xalay ay qaadeen Talyaaniga oo...